Tafayor Android Antivirus: ramsonware ကိုကာကွယ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း Androidsis
သင်၏မိုဘိုင်းအတွက်အလွန်ပေါ့ပါးသော Android ဗိုင်းရပ်စ် Tafayor
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဤကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိခြင်းသည်အလွန်နည်းပါးသော်လည်းအမှန်မှာအခြေအနေပြောင်းလဲနေသည်။ လက်ရှိတွင်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည် ransomware အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုသိသိသာသာအတားအဆီးဖြစ်စေကြောင်းဝှက်ထားသော။ ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ရမယ် ဒီနေ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်.
အဖြေ? Tafayor တစ် Android antivirus တကယ်တော့ပြီးပြည့်စုံပြီးကျွန်တော်တို့ဟာ Google application စတိုးကနေအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်သည်။ the ၏အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည့်မျက်လုံးXDA developer များ ဒီပရောဂျက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲ၊ ဒါကြောင့်သင့်ကိရိယာအတွက်ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ app ကိုလုံလောက်တဲ့ veracity ကိုပေးနိူင်တယ်။
သင်၏ Android ဖုန်းအတွက်အလွန်ပေါ့ပါးသောဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး Tafayor သည်ဤနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်
ဟုတ်တယ်၊ ဒီ Android ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအသစ်မှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သိပ်မများပေမယ့်သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ Google application store ရဲ့ဆာဗာတွေပေါ်မှာတင်ထားတာကပုံမှန်အတိုင်းပဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ရှိသည်။ စတင်ရန် တေးသီချင်း ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးတွင်aအလေးချိန် ၄.၅ megabytes၊ သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက်မှာဒါကသင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှာဒီ Android ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းရမယ် ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိ interface ကို။ အကောင်းဆုံး? ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရုံသာမက၎င်းသည် ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏စက်နှေးကွေးစေရန်အတွက်နောက်ခံတွင်အလုပ်လုပ်သောလျှို့ဝှက် application များကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပြောရရင်ဒါမှမဟုတ် Android antivirus ၎င်းတွင်၎င်း၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုတိုးတက်စေရန်နေ့စဉ်မွမ်းမံမှုများရှိသည်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်မှုလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းမှအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောမည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ချနိုင်သည်။
Tafayor သည်အနည်းငယ်သာအလုပ်လုပ်ကိုင်သည်၊ သင်ကြိုးစားရန်ယူရိုငွေမပေးရဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၎င်း Android ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ကို ramsonware မှကာကွယ်ရန်သည်သာမန်အသိကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိုယ်ကျင့်တရား၏ရင်းမြစ်များမှကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်သော application ထက်အနည်းငယ် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » သင်၏မိုဘိုင်းအတွက်အလွန်ပေါ့ပါးသော Android ဗိုင်းရပ်စ် Tafayor
ဒီလိမ်လည်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောခြိမ်းခြောက်မှုမှာ Play စတိုးမှမလာသည့်တပ်ဆင်ထားသည့် application များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မသိသောအသစ်တစ်ခုကိုမပြောပါ။ ဤလိမ်လည်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်မည်မျှရသနည်း (ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည် androidsis) ??????
Huawei အတွက်လေကောင်းလေလေ။ Kirin ပရိုဆက်ဆာများကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်
ZTE Blade A5 2019: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ ၀ င်ပေါက်အဆင့်အသစ်